दुर्गमको भत्ता पचाएर सुगममा बस्छन् प्रतिष्ठानका पदाधिकारी
दुई हप्तादेखि अक्सिजन अभाव हुदाँ छटपटाउँदै बिरामी
निर्माण सञ्चार, जुम्ला | कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञापन प्रतिष्ठान जुम्लाका पदाधिकाहरु दुर्गमको भत्ता खाएर सुमगमा बस्ने गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानका अधिकांश पदाधिकारीहरु विभिन्न बाहानामा सम्पर्क कार्यालय काठमाण्डौँमा धेरै बस्ने गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयस्तरीय कामकाजको बाहनामा महिनौ भन्दा बढी समय सम्पर्क कार्यालयमा बस्ने गरेको प्रतिष्ठान स्रातले बताएको छ ।
अहिले पनि प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजेन्द्रराज वाग्ले, शिक्षा अध्यक्ष धर्मराज श्रेष्ठ, रजिष्ट्रार विश्वराज काँफ्ले डिनद्धय मोदनाथ मराठ्ठा र गायत्री राई तथा निर्देशक धर्मराज गोसाँई लगायतका पदाधिकारी करिब २ महिना देखि मन्त्रालयको कामको बाहनामा जिल्ला बाहिर बसेका छन् दुर्गमको ९० प्रतिशत भत्ता खाएर प्रतिष्ठानका पदाधिकारी सम्पर्क कार्यालय काठमाण्डौँमा बस्ने गरेको जुम्ली बासीको आरोप छ ।
प्रतिष्ठानको केन्द्रिय कार्यालय जुम्लामा भएपनि पदाधिकारी कमै मात्र बस्ने गरेका छन् । प्रतिष्ठानमा दुई हप्तादेखि अक्सिजन अभाव हुदाँ विरामीहरु छटपटराई रहेका बेला पदाधिकारीहरु भने कामको बाहानामा बेखबर देखिन्छन् ।
प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काँफ्लल काम विषेशले आफु काठमान्डौ गएको काठमान्डौबाटै जनकारी दिए । मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान गोष्ठि भएका कारण सहभागी हुन गएको उनको भनाई छ ।
अन्य पदाधिकारी किन र कहिले सम्म कहाँ ? गएका हुन भन्ने बारे रजिष्टार काफ्लले स्पष्ट भनेनन् । २०७४ कार्तिक १४ गतेका दिन पत्रकार सम्मेलन मार्फत कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रगति समिक्षा सार्वजनिक गर्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले घनिभूतमा काम गर्ने सार्वजनिक गरेका थिए ।
तर, त्यो पत्रकार सम्मेलनमा पदाधिकारीहरुले ठिक्क मात्रै पारेका छन् । प्रतिष्ठानका पदाधिकारी जुम्लाको चिसो छल्नको लागि विभिन्न बाहाना गरेर सुगममा जाने गरेका छन् ।
दुर्गम भत्ता खाने तर, सुगममा बस्ने प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको नियति स्पष्ट देखिन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा भएकोले सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको प्रतिष्ठानलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने कुनै ठोस योजना पदाधिकारीले बनाउन सकेका छैनन् ।
पदाधिकारीबाटै ठोस योजना नआउँदा प्रतिष्ठानका लागि सरकारले समेत कुनै ठोस बजेट दिन सकेको छैन । प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. राजेन्द्रराज वाग्ले, रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्ले र अस्पताल निर्देशक डा. धर्मराज गोसाईले प्रतिष्ठानको विकास र विस्तारमा कुनै योजना ल्याउन नसकेको स्वयम् प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
प्रतिष्ठानका यी पदाधिकारी अधिकांश समय ललितपुरको सम्पर्क कार्यालयमा समय बिताउने गर्दछन् । जसले जुम्लामा प्रशासनिक देखि जटिल किसमका समस्या हुने गरेको छ ।
आइतबार, ९ पुस ०७४